Wallpapers miloko | Creatives Online
Rehefa manana solosaina ianao, ny mahazatra dia ny wallpaper dia natao manokana. Azonao atao ny mametraka sary, collage, sary ... Fa ny sary miloko mareva-doko Mbola izy ireo no tsara indrindra satria zara raha mampiasa fitadidiana solosaina izy ireo ary miankina amin'ny loko azonao atao ny manaitra fahatsapana samihafa.
Fa aiza no ahitana wallpapers miloko maimaim-poana izay vita tsara? Eto izahay dia manome anao hevitra momba ny toerana hahitana azy ireo. Ary teny an-dalana, koa ny fomba ahafahanao manangana ny mombamomba anao manokana.
1 Aiza no télécharger wallpapers miloko
1.3 Vola Arivo
1.4 Wallpaper Abyss
1.9 Desktop tsotra
2 Ahoana ny fomba fanaovana background miloko
Aiza no télécharger wallpapers miloko
Noho ny Internet dia afaka mahita loharano maro azo ampiasaina izahay, sady maimaim-poana no karamaina. Ny iray amin'izy ireo dia wallpapers miloko, izay manampy amin'ny fananana tonality fanamiana eo amin'ny efijery ary manatsara ny vokatra na ny fialan-tsasatra. Aiza anefa no ahazoana ireo vola ireo? Manolotra ireto tranonkala manaraka ireto izahay.
Ny Pixabay dia heverina ho banky sary maimaim-poana. Amin'ireo loharanon-karena an'arivony misy dia afaka mahita sary miloko ianao. Marina izany Tsy dia be loatra, fa ho hitanao ny karazany ao aminy, sady loko mivaingana no mitambatra.
Mila manokana fotoana fotsiny ianao hahitana izay mifanaraka amin'ny toetranao na ny tsironao.
Banky sary maimaim-poana iray hafa, ary ny iray tonga lafatra amin'ity karazana wallpaper miloko ity dia Freepik. Araka ny fantatrao, ny zavatra ho hitanao indrindra dia vectors, saingy tsy midika izany fa tsy manana safidy hafa ianao.
Amin'ity tranga ity Eny, hahita vola ianao, na dia mety hihena aza ny habeny indraindray, indrindra satria "square" izy ireo. ary indraindray rehefa apetrakao eo amin'ny écran dia tsy maintsy mihinjitra be loatra na manao duplicate ianao ary mahatsikaritra ny tonon-taolana. Na izany aza, resaka fitsapana izany.
Ao amin'ny FondosMil dia manana sary maro miloko voafantina vonona ho alaina ianao. Ny tsara indrindra dia azo ampiasaina amin'ny solosainao, solosaina, tablette, sns. ary koa ho an'ny finday.
Manokana, manana fiaviana miloko 62 izy ireo, fa raha manome fiaviana miloko ianao dia hahazo bebe kokoa, voasokajy amin'ny loko lehibe, na mavokely, mainty, mena, maitso ...
Afaka omenao izany eto.
Miaraka amin'ny sary miloko efa ho 2000, manana ity tranokala ity ianao ho safidy hafa alaina. Mifanohitra amin'ny teo aloha, eto ianao dia hahita karazana famelabelarana loko hafa, milalao amin'ny endrika, endrika ary fiovaovan'ny loko abstract. Azo antoka fa hisy loko mivaingana ihany koa, fa tsy maintsy mitady azy ireo tsara kokoa ianao.
Hitanao izy ireo eto.
Tranonkala iray hafa ahitanao ity karazana tahirim-bola ity dia ity. Ao no hahitanao endrika tena zava-baovao, izay saika mitovy amin'ny sary hoso-doko noho ny wallpapers fantatrao. Misongadina ny fizarana amin'ny fiaviana miloko pastel, raha anisan'ireo tia an'io karazana loko io ianao dia hanana fifantenana ny tsara indrindra.
Afaka mijery ianao eto.
Pexels dia banky sary maimaim-poana hafa, saingy tamin'ity tranga ity dia nitady wallpaper miloko izahay ary nahita iray fizarana momba ny fiaviana pastel izay tianay. Manana loharanon-karena an'arivony ianao ary afaka mahita iray na maromaro izay hahatonga anao ho tia.
Raha toa ka mila loko matanjaka kokoa ianao dia hahita azy ireo ihany koa. Ankoatr'izay dia manana tombony izy ireo fa samy mitsangana sy mitsivalana, ka afaka mahita wallpapers ho an'ny findainao na ho an'ny solosainao na solosainao ianao.
Ity tranonkala ity dia iray amin'ireo malaza indrindra, ary iray amin'ireo tsara indrindra, amin'ny resaka fampidinana wallpapers. Manana sary avo lenta izy io ary tsy mampino ny kalitaon'ny wallpapers.
Eny, hanao izany ianao mahita karazany maro, tsy loko ihany, fa sary, sary, sns. ka tsy maintsy manasivana ianao rehefa mikaroka mba hampisehoana aminao ny valiny tadiavinao.
Izy io dia manampahaizana manokana amin'ny ringtones finday sy ny wallpapers. Tahaka ireo ohatra teo aloha, eto koa dia afaka mahita karazany maro ianao, tsy ny fiaviana miloko ihany fa ny fanoharana, lalao video, saina, sns.
Fa raha ny loko, ny endrika sasany dia tena mahagaga ka handany vola be ny handosirana azy.
Ity tranonkala ity dia mety tsara raha mitady wallpapers tsotra ianao. Raha toa ianao ka ao anaty minimalism ary te hanana fiaviana miloko sy zavatra hafa, ity no safidy tsara indrindra hanatrarana azy.
Ny famaha dia avo (farafahakeliny 2880 × 1800 teboka) ary hahita safidy tena manaitra fa tsy misy overloading. Ho fanampin'izay, raha manana kisary maro eo amin'ny biraonao ianao dia ny safidy tsara indrindra mba hisorohana ny mahavoky ny tenanao.
Ahoana ny fomba fanaovana background miloko
Raha toa ka tsy nisy naharesy lahatra anao taorian'ireo rehetra hitanao ireo, dia izao no fotoana hirosoana amin'ny "teny lehibe kokoa". Ny fanaovana wallpapers miloko ho anao manokana no tiana holazaina. Mba hanaovana izany dia mila mampiasa mpanonta sary ianao, na programa anananao na an-tserasera. Miaraka amin'ilay hitanao fa malalaka kokoa.
Ny zavatra manaraka dia ny fanokafana antontan-taratasy tsy misy dikany. Mikasika ny habe, dia diniho ny famahana ny solosainao, mba hahafahanao manao ny sary tsy misy fahaverezan'ny kalitao na tsy mila mampitombo azy ary mijery miparitaka kokoa.
Rehefa misokatra ny antontan-taratasy dia misy fomba maro hamoronana ny loko. Ohatra, mety hihevitra loko mivaingana ianao, ka ny fampiasana ny fitaovana fandokoana handoko ny zava-drehetra amin'ny tsindry iray dia mahomby indrindra. Azonao atao koa anefa ny manao gradient misy loko roa samy hafa. Safidy iray hafa dia ny mandoko ny ampahany sasany amin'ny loko tsirairay ary manao composition.
Rehefa vita ny aingam-panahinao dia tsy maintsy mitahiry ny sary amin'ny png na jpg ianao. Izy ireo no mahazatra indrindra ary ireo izay tsy tokony hanome anao olana ary avy eo apetraka eo amin'ny efijery.
Tsarovy fa rehefa voatahiry ianao dia tsy maintsy mandeha any amin'ny firafitry ny efijery hanova ny sary ankehitriny amin'ny sary noforoninao. Azonao atao mihitsy aza ny manao maromaro ary mamela ny solosaina hanova azy io isaky ny x, na mampiasa iray ho toy ny fiambenana efijery ary avy eo iray hafa ho an'ny wallpaper miloko.
Manapa-kevitra ianao izao raha te hamorona ny anao manokana ianao na hisintona ny fiaviana miloko avy amin'ny tranokala hafa. Afaka manome soso-kevitra hafa efa hitanao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Sary an-tsary miloko
Orinasa mpamorona sary 10 ambony